Love You Forever (2020) | MM Movie Store
တရုတျကြောငျးသားကားလေး ကွညျ့ကွမလား ??ကြောငျးသားကားလေးရယျလို့မဟုတျဘူး…….ဘယျလိုပွောရမလဲ အခဈြကားပေါ့…ဟုတျတယျ အခဈြကား…….ဘာသာပွနျတဲ့သူတောငျ ခဈြသူကို သတိရသှားတဲ့အထိ စှဲဆောငျလှနျးတဲ့ အခဈြကား…
မိသားစုနဲ့ကွညျ့လညျး သငျ့လြျောပွီးဒီကားလေးကို ဒေါငျးပွီး ခဈြသူကိုပေးလိုကျရငျတော့ စပါယျရှယျပါပဲ…ထားပါ…ဇာတျလမျးလေးပွောရအောငျ..ငယျငယျလေးကတညျးက ကစားဖျောကစားဖကျလငျးကျော နဲ့ ခြိုးခနျြး က ၆ နှဈလောကျမှာကှဲသှားခဲ့ပါတယျ။
အဲ့တုနျးက ကစားနရေငျးနဲ့ လကျပတျနာရီတဈလုံးကောကျမိရာက ဇာတျလမျးစတာပဲ။အထကျတနျးရောကျတော့ သူတို့နှဈယောကျပွနျတှပေ့ါတယျ။ကြောငျးသားသဘာဝ ပြျောပြျောရှငျရှငျပေါ့…အဲ့လိုနဲ့ ကောငျလေး မှေးနမှေ့ာမထငျမှတျဘဲ ခြိုးခနျြး က ကားမတျောတဆမှုနဲ့ အသကျသဆေုံးခဲ့ပါတယျ။
ဆေးရုံမှာ လငျးကျော ကတော့ကောကျရတဲ့လကျပတျနာရီကို ကိုငျပွီး ငိုယိုနခေဲ့တာပေါ့…ထပျပွောခငျြပမေယျ့ … spoil မှာကွောကျလို့ မပွောတော့ဘူး“ခဈြနမေယျ အခြိနျတှမေကုနျဆုံးခငျထိပေါ့”တကယျ ရငျထဲထိလို့ ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး ကွညျ့ဖို့ တိုကျတှနျးပါတယျနျော…..
တရုတ်ကျောင်းသားကားလေး ကြည့်ကြမလား ??ကျောင်းသားကားလေးရယ်လို့မဟုတ်ဘူး…….ဘယ်လိုပြောရမလဲ အချစ်ကားပေါ့…ဟုတ်တယ် အချစ်ကား…….ဘာသာပြန်တဲ့သူတောင် ချစ်သူကို သတိရသွားတဲ့အထိ စွဲဆောင်လွန်းတဲ့ အချစ်ကား…
မိသားစုနဲ့ကြည့်လည်း သင့်လျော်ပြီးဒီကားလေးကို ဒေါင်းပြီး ချစ်သူကိုပေးလိုက်ရင်တော့ စပါယ်ရှယ်ပါပဲ…ထားပါ…ဇာတ်လမ်းလေးပြောရအောင်..ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကစားဖော်ကစားဖက်လင်းကော် နဲ့ ချိုးချန်း က ၆ နှစ်လောက်မှာကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့တုန်းက ကစားနေရင်းနဲ့ လက်ပတ်နာရီတစ်လုံးကောက်မိရာက ဇာတ်လမ်းစတာပဲ။အထက်တန်းရောက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်တွေ့ပါတယ်။ကျောင်းသားသဘာဝ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့…အဲ့လိုနဲ့ ကောင်လေး မွေးနေ့မှာမထင်မှတ်ဘဲ ချိုးချန်း က ကားမတော်တဆမှုနဲ့ အသက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဆေးရုံမှာ လင်းကော် ကတော့ကောက်ရတဲ့လက်ပတ်နာရီကို ကိုင်ပြီး ငိုယိုနေခဲ့တာပေါ့…ထပ်ပြောချင်ပေမယ့် … spoil မှာကြောက်လို့ မပြောတော့ဘူး“ချစ်နေမယ် အချိန်တွေမကုန်ဆုံးခင်ထိပေါ့”တကယ် ရင်ထဲထိလို့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်နော်…..